SIDA LOO KORO THUJA KA SOO ABUURKA, QAABABKA ABUURKA ABUUR AH EE WARSHAD - SOOSAARKA DALAGGA
Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan beeritaanka thuja, sida loo koro geed caleenta oo ka soo baxa abuur
Thuja - mid ka mid ah wakiilada ugu quruxda badan ee dhirta cadceedda. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qorsheynta qaabka muuqaalka. Aboorka quruxda badan ee dhirta ayaa ah mid aan la qabin oo daryeel ah oo leh hanti waxtar leh si loo soo saaro walxaha firfircoon ee hawada - phytoncides. Tani waa waxa beeraleyda qurxan ee cagaaran iyo dadka degaanka xagaaga, kuwaas oo yaqaan sida loo koro thuja, waxay ku dhacdey jacayl. Thuja waxay jebisaa gooynta iyo abuurka. Goobidda geedo noocyo kala duwan ayaa laga iibsan karaa xannaanada ama beerta khibrad leh oo iyaga jilicsan. Laga soo bilaabo abuur isku mid ah, way fududahay in la koro thuya on adiga kuu gaar ah. Aynu isku dayno inaanu si sax ah u ogaano sida aad adigu u kori karto.
Ma taqaanaa? Thuja galbeed ayaa ku kora dhammaan xaaladaha beerashada, sida aan qabyo ahayn waxay u ridi doontaa beeraley cusub.
Thuja abuurka: fara-gelinta iyo nadaamka habkan
Faa'iidada weyn ee sii kordhaya abuurka tui ah ee guriga waa suurtogalnimada in la kordhiyo tiro badan oo geedo isku mar, oo waxay noqon doonaan cabbirka isla iyo da'da. Tani waa mid xiiso u leh kuwa qorsheynaya inay ka sameeyaan dijo ama wax lagu dhejiyo goob weyn. Intaa waxaa dheer, thuja koray ka soo abuur, ka fiican oo loo habeeyey aagga beerashada.
Habkani waa mid raqiis ah in la isticmaalo, laakiin waxa uu leeyahay dhibaatooyinka:
geedi socod dheer oo ah horumarinta seedling. Muddada laga bilaabo abuurka si ay u beerto dhirta ee ciidda waxay socotaa ilaa 5 sano;
geedo waxay u egtahay muuqaal ahaan, laakiin waxay lumin kartaa qaabka iyo tayada noocooda kala duwan.
Sidee loo beeraa abuurka iyo diyaarinta ciidda
Haddii aad si fiican u fekertay oo aad go'aansatay in aad soo saarto thuja abuurka, waxaad u baahan tahay inaad si dhab ah u wajahdo arrintan. Waxay dhamaan ku bilaabmaa ururinta abuurka xilliga dayrta hore. Tani, ubbooyo caleemo ama brownish ah ayaa laga saaray geedkii waalidkii oo la qalajiyey qol diiran dhawr maalmood. Marka boogta la muujiyo, waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah ugu garaacdo. Tani waxay ku siin doontaa fursad ay ku soo saaraan oo ay ururiyaan miraha buniga yar. Ka dib marka la soo ururiyo abuurka, waa lagama maarmaan in la kala saaro.
Ku duub miraha la soo ururiyey maro oo ku aaso dhulka, ku dabool caleemaha dhacday ama xayiraadda jira. Abuurka dheeraadka ah waxaa laga saaraa dhulka la dhalaaliyay oo ku shub weel ka buuxsamay ciid ka sareeya, kaas oo ah in la geliyo qaboojiyaha muddo laba bilood ah. Marxaladda ugu muhiimsan waa diyaarinta ciidda. Wixii koritaanka wanaagsan, thuja waxay u baahan tahay isku dar ah nafaqo gaar ah: dhulka sodax iyo peat qaybo siman iyo qaybta labaad ee ciid.
Waa muhiim! Si loo siiyo taajka Tui ah mabaadi'da loo baahan yahay waxay noqon kartaa barxadda beerta, jarida qaybaha sare ee caleemaha dhinaca iyo korka.
Tiknoolojiga beerista: sida loo faafiyo abuurka thuy
Qeybta hoose ee sanduuqa alwaaxa, qulqulka horay loo dhigey ee ugu yaraan 2 cm, isku darka nafaqada ah ayaa lagu shubay korka kore, heerkuleysan oo is dulqaadan. Markaas, miraha thuja lagu beeray si siman ee jeexjeexyada laga sameeyey. Booska waa in aan ka yarayn 6-7 cm Miro ayaa yar yar la jajabiyey isku dar ah peat-sand, lagu waraabiyo qori buufin, sanduuqa waxaa lagu daboolay filim ama galaas ka hor biqilka. Waraabinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo dhalada buufin si looga fogaado caleenta abuurka ee ciidda.
Dheriga waa inuu ku yaal meel diiran ka hor biqilka abuurka. Ka dib marka uu ka soo baxo sprouts, dheriga leh thujas ayaa loo wareejiyaa meel qabow leh nal ku filan. Xaaladdan, hawo-qaadashada iyo ka-saarista sprouts la qasbay waa qasab. 40 maalmood ka dib markii la beero, geedo thuja waa in ay kor u kacaan, ka dib markii filimka laga saaro. Habkani wuxuu kordhinayaa abuurka thuja wuxuu abuuraa biqil aad u wanaagsan, laakiin wuxuu u baahan yahay dadaal badan iyo helitaanka dheriga beeritaanka.
Ma taqaanaa? Noocyada kala duwan ee Tui Smaragd waa badbaado dhab ah, wuxuu koraa illaa 150 sano.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xulasho kale, sida loo abuuro thuja ka soo abuurka si fudud. Ujeedadaas awgeed, ururinta abuurka waxaa la qabtaa bisha Nofeembar isla markaaba isla markiiba lagu beeray dhulka iyadoon daaweyn hore loo siin. Waxyeello ma laha in lagu seexdo si ay u beerato balka, taas oo abuuri doonta shuruudaha wanaagsan ee abuurka. Guga, haddii habkani uu ku guuleysto abuurkaaga, caleemaha ayaa u muuqan doona muuqaalka u eg dill. Iyada oo habka ugu badan ee dabiiciga ah ee sii kordhaya seedling thuja koraan karaa ilaa 7 cm ee height.
Sida loo daryeelo geedo
Sidaa daraadeed, waxaan ogaanay sida loola tacabayo, iyo hadda waxaan baran doonaa habka daryeelidda geedo. Haddii loogu magacaabo geedo Tui aan si culus loo xajin karin, waxaana jira qolka warshad walba si ay u koraan, ka dibna sanadka ugu horeeya ee noloshooda, geedo aan la tallaalin. Waxaad ku shubi kartaa sanduuqa ee isku dar ah ciidda taas oo miraha la beeray.
Sannaddii labaad ee nolosha ee guga, geedo waa in lagu beeray dheriyo kala duwan oo ku rid meel gudcur ah on waddada. Waraabinta isla waqti waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah. Xilliga jiilaalka dhirta waxaa loo wareejiyaa qolka. Sannadka saddexaad ee nolosha ilaa May, geedo ayaa la dhigaa waddada, iyo dayrta ay diyaar u yihiin beerto at meel joogto ah ee koritaanka.
Warshadu waa inay ahaataa kaluunka, heerkul fiican oo loogu talagalay geedo xagaaga laga bilaabo +17 ilaa +23 digrii. Dheriga leh thuja waa inay qaboobaan heerkul ah +15 ilaa +18 digrii.
Ka dib markii laga beerto dhul furan xilliga qaboobaha, geedo waa in lagu duubaa.
Geedo waxay u baahan yihiin badbaado ka soo baxa qoraxda tooska ah. Marka kaydinta sanduuq leh geedo thuja ah guriga, ku dhig daaqada waqooyi ama galbeed. Dhirta waxay yeelan doonaan iftiin si fiican u iftiiminaya horumarinta.
Si loo hagaajiyo koritaanka geedo u baahan yahay in ay abaabulaan quudinta caadiga ah ee macdanta sida potassium, fosfooraska iyo nitrogen, waxay sidoo kale noqon doontaa molybdenum, boron iyo manganese waxtar leh. Bacriminta Agricol iyo Bacriminta ayaa ku haboon ujeedooyinkaas. Bacrimiyo laba jeer bil walba.
Waa muhiim! Marka beerista, ha qotonin qoorta xididka geedka, tani waxay sababi kartaa dhimashadiisa.
Marka goosashada geedo iyo sida loo sameeyo
Qalabaynta geedo galay dhul furan ayaa la sameeyey aan ka horeyn sanadka saddexaad haddii loo baahdo, laakiin waxa fiican in la sameeyo sannadka shanaad ee nolosha. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad doorato kursi madow oo aad diyaariso. Si tan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo mitir kasta oo laba jibaaran ee beerta mustaqbalka leh qaabka soo socda: baaldi of humus, 2 tbsp. qaaddo "Nitroammofoski" iyo quraarad qoryo qoryo ah. Isku dar ah waa in lagu qaso, oo ku faafay dhulka oo si fiican u qodo aagga.
Hadda dhibicda ugu muhiimsan - sida loo kobciyo tuyu ee dhulka furan. Geedo waa la beeray si markaa ku jirta 30 mitir oo aan lahayn meel bannaan oo loogu talagalay koritaanka iyo horumarka. Iyadoo transplanted seedling ah, waxaa la waraabiyaa iyo mulched peat. Daryeel dheeraad ah waa sahlan, waxay u baahan tahay waraabin aan caadi ahayn, dabacsanaan iyo jarista haramaha. Ka dib markii seedling thuja gaaro height height of mitir nus, geedka diyaar u yahay inuu ku tallaali meel joogto ah sii kordhaya.
Hadda waxaan ognahay sida loo daadejiyo abuurka thuy. Inkastoo ay tahay geedi socod dheer oo qaadanaya in ka badan hal sano, laakiin aad u xiiso badan. Uruurinta abuurka, diyaarintiisa, beeritaanka, caleemaha ugu horreeya, dhirbaaxada - dhammaantood waa dill, aan thuja, muuqaalka irbadaha ugu horreeya, ka dibna dabeecadda "thole" qiyaaso, dhowr faashado - iyo dhirta aad ku raaxaysato taajirkeeda casiir leh.
Maaddaama bannaanka u ma ka cabsanayaan dhibaatooyin, waxay isticmaalaan habkan ee dhalmo ee pyramidal iyo noocyada guud ee thuja.
Qeexitaanka muuqaalka muuqaalka Tidea iyo Gloxinia, kala duwanaanshahooda iyo sawirada ubaxyada Tidea Violet, iyo sidoo kale muuqaalada ubax
Baradho aan lahayn dufan "Margherita", oo ay soo saareen beeraha Holland - sharaxaadda kala duwanaanta, astaamaha, sawirada
Sida loo kordhiyo dhalidda ee dabacasaha? Miyaan u baahanahay inaan qooyo miraha ka hor inta aan la beeri?
Fresh, hindis iyo salad si fudud-sameeyo-salad of Kaabashka Pekage leh qajaar iyo hadhuudh
Dib u eegida noocyada ugu wanaagsan ee dabocase gobolka Moscow iyo Central Russia. Talooyin ku saabsan doorashada iyo kordhinta
Meesha magaalada ku taal
Bacriminta hore bislaado bislaado waa raad dhab ah ee ninkii beerta ka shaqaynayay. Iyaga waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Belle F1" - xarrago, hoos udhicin si loo daryeelo, oo waxtar leh. Midig, miraha cufan ayaa si wanaagsan loo kaydiyaa oo waxay leeyihiin dhadhan fiican oo dhadhan leh. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fasalka waxaad ka baran kartaa maqaalkeena. Read More
Qalabka iyo sifooyinka farsamada ee mashiinka MTZ-1221
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Soosaarka dalagga 2020